Nyocha 2021 PGA - cheapinternetsecuritysoftware.com
Nyocha 2021 PGA
Na-ekpo ọkụ n’ikiri ụkwụ Nna-ukwu, isi nke abụọ nke afọ dịkwasịrị anyị n’ụdị PGA Championship. Afọ gara aga bụ afọ nke Collins Morikawa, hotshot dị afọ iri abụọ na atọ nke kachasị nwee ụbọchị Sọnde, na-agbada n’agba ikpeazụ iji cheta ịhapụ ubi ahụ.
Morikawa bụ 28/1 iji megharịa ihe ngosi ahụ ma anyị anaghị eleghara onyinye dị egwu anya site na ịme nke ahụ, mana anyị ahọrọla isii ọzọ iji nọrọ na ngwakọta na-abịa ụbọchị ikpeazụ na Kiawah Island.
Onye kacha mma nke Britain
N’elu ahịa ahụ bụ Rory McIlroy, otu ihe kpatara nke a nwere ike bụrụ ihe omume PGA Championship na-emeri nke ọma na nke a afọ itoolu gara aga.
The Northern Irishman mere ka ọ dị mfe, ọ na-ebute ụzọ nke atọ na nke ikpeazụ ma na-eme ngwa ngwa na enweghị ntụpọ 66 na mmeri asatọ, na-eme ka ọ bụrụ nwoke nke ọdụdụ iji merie ọtụtụ isi.
N’afọ a, McIlroy mechara nke atọ na Abu Dhabi Championship wee merie Wells Fargo Championship na North Carolina kwa izu abụọ gara aga. Enwere ike ịme…
Anyị ekwuola ogologo oge – nke ahụ kwesịkwara ịkwado Tyrrell Hatton, nwoke ahụ rutere Rory na Abu Dhabi Championship ahụ a kpọtụrụ aha na Jenụwarị.
Onye mmeri abụọ nke Alfred Dunhill na onye mmeri nke Arnold Palmer na 2020, Hatton nwere àgwà ndị dị mkpa iji kwụọ ụgwọ. Ọ bụrụ na onye Bekee wetara egwuregwu ‘A’ ya ma nwee izu dị mma na elu, 29 afọ nwere ike igosi ezigbo uru.
US megide ha
Maka mgbanwe, Dustin Johnson ahụghị onwe ya n’elu ahịa ịkụ nzọ – ikekwe n’ihi mmerụ ahụ mere n’oge na-adịbeghị anya nke hụrụ ya ka ọ napụrụ na Byron Nelson.
Onye isi mmeri abụọ agbaala agba nke abụọ n’ime asọmpi PGA abụọ gara aga ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ịga nke ọma, ọ ga-adị 75% nke ụzọ Grand Slam. Kedu ihe ọzọ, nwa afọ South Carolina nwere ohere ime ya na ala ụlọ. Nke ahụ ga-abụ ihe pụrụ iche.
Ogologo oge anyị bụ Keegan Bradley, onye ị nwere ike ijide na 90/1 na Grosvenor Sport. Ọ bụ onye ọzọ masịrị gburugburu Agụmakwụkwọ Ocean na 2012, na-emecha jikọtara nke atọ n’afọ mgbe ọ meriri aha ahụ na Georgia.
Bradị Bradley na-adịbeghị anya na ndị isi ahụ anaghị agụ nke ọma, mana asọmpi atọ ikpeazụ ya hụrụ ka ọ gwụchara T4, 2nd, na T18 na Wells Fargo. Yabụ ihe anyị na-ekwu bụ, enwere ohere…
Ọ bụ ihe dị mma na 2021 maka Leishman, bụ onye nwetara akara ise kachasị elu na Nna-ukwu, jikọtara ya na Cameron Smith (karịa ya n’otu oge) iji merie Zurich, ma mechaa na 25 kacha elu na ngwụcha izu ikpeazụ na Byron Nelson.
Ọ nwere ezigbo ụdị na njikọ yana agbanyeghị na ọ dabatabeghị isi, ọ meriri ụfọdụ n’ime ihe omume kachasị na njem ahụ masịrị Kiawah n’ihu. Nke a nwere ike ịbụ nnukwu oge ya?
Kemgbe Cameron Smith mechara T2 na Masters na afọ gara aga, ọ na-esiri ike ịhapụ ya dị ka isi mmalite mbụ. Na mbido afọ a, Aussia jidere ihe ọzọ dị elu-10, mechara nke anọ na Jenesis wee bulie mmeri Zurich nke abụọ ya na Leishman.
Otu n’ime ihe kachasị mma na njem ahụ mgbe ọ na-abịa na strok nwetara gburugburu elu na itinye, Smith nwetara egwuregwu ahụ iji gaa n’ụzọ niile – nwoke ahụ nwere mullet nwere obi ike na ọnọdụ. Egwuregwu ndị ọzọ na-egosi na ọ ga-abụ.
PGA Championship na ịkụ nzọ golf niile dị na Grosvenor Sport, anyị na-akwụkwa ebe asaa ụzọ ọ bụla na isi nke abụọ nke afọ.
* Kwuru na enwere ike ịgbanwe
Etu esi ahọrọ cha cha cha cha kacha mma
Ihe ewu ewu n’ịgba chaa chaa n’ịntanetị na-adị elu oge …